कान टक्कर पछि कूद गर्दा स्थिति, धेरै गर्न परिचित छ, तर अक्सर यो घटना जो तर आमाबाबुले बीच चासो कारण सक्दैन, छोराछोरीको हुन्छ। कहिलेकाहीं यो गर्दैन चिन्ता बच्चा वा वृद्धि भन्दा समय, तर बिदा यसलाई रोक्नु लागि आफूलाई छ अझै पनि छैन लायक यो। धेरै calmer तपाईं सम्भावित उपचार नियुक्त गर्ने एक विशेषज्ञ परामर्श यदि महसुस हुनेछ।
बच्चा को कान गांठ विभिन्न कारण उत्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ। ती डाक्टर भन्नु कि सबैभन्दा अवस्थामा यी ट्यूमर खडा कारण वृद्धि को लसीका नोड्स वा घटना atheroma। सोही, निदान छ उत्तरार्द्ध धेरै सरल छ - यो एउटा सानो आकार, बस कान पछि स्थित छ जो एक परिपत्र गठन छ। Atheroma यसलाई कुनै पनि असुविधा पैदा गर्दैन र पूर्ण सुरक्षित छ, चोट छैन। तर संग अवस्था पनि लसीका नोड को सुनिंनु थप अप्रिय - एउटा सानो मटर अत्यन्तै पीडादायी हुन र रोगी फिक्री कारण, असुविधाको धेरै हुन सक्छ।
तर, यो छैन सबै बच्चा को कान धक्का देखिन सक्छ जसको लागि कारण छ। यी मौखिक संक्रमण, बल्न र आघात, प्रतिरक्षा समस्या, सबै प्रकारका हुन सक्छ विशेष मा कमी र विभिन्न क्यान्सर र यस्तो मधुमेह, एचआईभी र क्षयरोग रूपमा पुरानो रोग को गठन। को atheroma रुचि छैन जो कान हार्ड गांठ, पछि, यो नकारात्मक परिणाम बच्न डाक्टर यसलाई देखाउन राम्रो छ जब, सहमत हुनुहुन्छ।
रोगहरु को निदान कस्तो छ? सुरुमा, सबै दिशामा रगत परीक्षण, सबैभन्दा जटिल समस्या प्रतिक्रिया बाहेक छैन। आवश्यकता मा कान पछि neoplastic आसन्न Tissues एक अल्ट्रासाउंड परीक्षा गर्न। अध्ययन अन्तिम चरण यसको उपस्थिति को ठीक लक्षण निर्धारण छ जो ट्यूमर, एक बायोप्सी हुनेछ। कुनै पनि मामला मा, यो दल्नु, ताप, उपचार विभिन्न nanodiamonds उपयोग गरदै र तरल संग मतलब कार्य गर्न आवश्यक छैन कुनै पनि मामला मा बच्चा को कान लागि धक्का को कारण निर्धारण गर्न। पनि प्रभावित क्षेत्र मा सूर्यका प्रभाव कम गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। यो सबै सुस्त मदत गर्नेछ, वा यो वर्तमान हो भने कम्तिमा रोग को विकास प्रकुपित छैन, र बच्चा स्वास्थ्य राख्नुहोस्।
को निदान मात्र यो सुनिंनु को फलस्वरूप सर्दी र प्रगतिशील कारण एक बच्चाको कान लागि धक्का को उपस्थिति, यो सम्भव छ भनेर देखाए भने चिन्ता र उसलाई आफैलाई मदत गर्न छैन। यो आवश्यक छैन डाक्टर सल्लाह छ जो उपचार, नत्याग्ने छ, तर तपाईं परम्परागत चिकित्सा को सल्लाह Resort यदि केही ठीक हुनेछ। यो चाँडै नयाँ गठन सामना गर्न मदत गर्नेछ। तर कुनै पनि मामला मा यो तपाईं आफैलाई निकै फेला घटनाको डाक्टर गर्न अभियान ढिलाइ गर्न आवश्यक छ कि सम्झना बढेको लसीका नोड, त्यो एकदम, असहज पीडादायी छ टक्कर र पनि शरीर तापमान मा वृद्धि निकट भूत र वर्तमान मा सर्दी अवलोकन गरिएन, र ।
छोराछोरीलाई हेरविचार र विशेषज्ञहरु को मद्दत बेवास्ता छैन!
Chorea रोग: लक्षण र रोग को उपचार
Acclimatization। यसको manifestations को लक्षण।
पुरानो गलसुआशोथ, उपचार र रोकथाम।
हिप भंग सर्जरी आवश्यक
Bubnovsky: घुँडा चोट - के गर्न? विवरण र उपचार
प्रोस्टेट हटाउन: सर्जरी, को प्रभाव
एव्जेनी Kolesov: जीवनी, परिवार, व्यापार र टेलिभिजन क्यारियर
"हिम सेतो र सात Dwarfs" को लेखक को हुनुहुन्छ?
फूलको संरचनाको योजना। फूलहरू उभयलिंगी र डाइरेक्टरी हुन्
के - ट्यांक को विश्व सुरुवातमा दुर्घटनाहरु?
कसरी आईफोन आफ्नो कम्प्युटर संगीत स्थानान्तरण गर्न सिक्न
असामान्य अनाज: खैरो, कालो, धमाकेदार, रातो चामल
रूसमा स्वच्छ शहरहरू के हुन्?
जूता "Givenchy" - मोडेल को विभिन्न
पहिले semeizverzheniya घर उपचार